Full cricket score - Sri Lanka vs Zimbabwe, one-off Test, Day 1: ZIM 344/8, Craig Ervine 151* | cricket | Hindustan Times
Full cricket score - Sri Lanka vs Zimbabwe, one-off Test, Day 1: ZIM 344/8, Craig Ervine 151*
Craig Ervine’s 151 not out put Zimbabwe in a comfortable position at stumps on Day 1 of the one-off Test vs Sri Lanka in Colombo on Friday. Zimbabwe made a poor start but recovered well after Rangana Herath took four wickets. Get full cricket score of Sri Lanka vs Zimbabwe here.
cricket Updated: Jul 14, 2017 17:34 IST
Zimbabwe cricketer Craig Ervine (R) plays a shot as Sri Lankan wicketkeeper Niroshan Dickwella (L) looks on during the first day of the only one-off Test match between Sri Lanka and Zimbabwe at the R Premadasa Cricket Stadium in Colombo on Friday. Get live cricket score of Sri Lanka vs Zimbabwe here.(AFP)
Craig Ervine’s patient 151 not out and his 84-run fifth wicket stand with Sikandar Raza helped Zimbabwe recover from a poor start (70 for four wickets) against Sri Lanka on Day 1 of the one-off Test in Colombo on Thursday. Rangana Herath took four wickets to send the Zimbabweans reeling but Ervine’s patience and application helped the Africans turn around. Sri Lanka are looking to usher in Dinesh Chandimal’s era as skipper by bouncing back from a humiliating ODI series defeat to Zimbabwe. Chandimal is leading the islanders in a Test for the first time after Angelo Mathews resigned Wednesday, following Sri Lanka’s shock 3-2 series loss to Zimbabwe, who won the toss and opted to bat today. Get full cricket score of Sri Lanka vs Zimbabwe Test, here.
If you can’t see full cricket score of Sri Lanka vs Zimbabwe, 1st Test, click here.